Dalka kenya waxaa la fasaxay in la cuno lagana ganacsado ilibka dameeraha. Reer kenya is ilaaliya hee. – ASM Raage
Dalka kenya waxaa la fasaxay in la cuno lagana ganacsado ilibka dameeraha. Reer kenya is ilaaliya hee.
Posted byabdullahi87 May 9, 2021 Posted inwararka somaliga ah
Dacwad uu soo gudbiyay mid ka mid ah kawaannada dameeraha, ayay maxkamaddu xukuntay in dowladda aysan si ku filan u difaacin kiiskeeda.
Xukunka ayaa ka dhigan in afarta kawaan ee dameeraha ee horay shatiga loogu siiyay inay ka shaqeeyaan Kenya ay hada dib u bilaabi karaan ganacsigooda. Tani waxay daba socotaa codsi guuleystey oo ay soo saartay shirkadda ‘Br Bryanant Slaughterhouse’, oo sheegatay in amarka dowladda uu ku xadgudbay xuquuqdeeda.
Sanadkii la soo dhaafay, Kenya waxay mamnuucday gawraca iyo dhoofinta dameeraha iyo wax soo saarkooda si loo ilaaliyo dameeraheeda gudaha ku nool. Dowlada ayaa kadib weydiisatay milkiileyaasha kawaannada inay u baddalaan goobahooda goobo lagu qalo xoolaha kale sida ariga iyo lo’da.
Madaxda gobalka hiiraan iyo magaalada beledwayn oo kubaxay qaboojinka dagaal 2 beelood ku dhex maray gobalka hiiraan.
Hay’adda Duulista Rayidka oo sheegtay in weli dalka uu mamnuuc ka yahay Qaadka Kenya